Mbada Diamonds Yochema neZvirango Zvainoti Yakatemerwa
Chivabvu 21, 2012
Imwe yemakambani ari kuchera mangoda kwaMarange, Mbada Diamonds, inoti mangoda ayo ari kutengwa nemari iri pasi nekuda kwezvirango zvehupfumi zvakatemerwa kambani iyi nenyika dzekuEurope neAmerica
Sachigaro wekambani iyi, VaRobert Mhlanga, vaudza komiti yeparamende inoona nezvezvicherwa nemhando dzemoto kuti kunyange hazvo makambani ekunyika dzakaita seChina, India nedzimwe ari kutenga mangoda, nyika dzekuEurope neAmerica ndidzo dzinotenga mangoda akawanda nemari yepamusoro.
Vati nekuda kwezvirango zvehupfumi zvakatemerwa kambani yavo, avo vari kuuya kuzotenga mangoda vanoatenga nemari iri pasi sezvo vachiziva kuti kambani yavo haina kwakawanda kwekuatengesera.
VaMhlanga vati kambani yavo iri kuita basa rayo nemazvo zvisinei nezvirango zvehupfumi zviripo. Vati kusvika pari zvino, Mbada Diamonds yaendesa kuhurumende mari inodarika mamiriyoni mazana mashanu emadhora.
Izvi zvatsinhira nasachigaro wekambani yehurumende yeZimbabwe Mining Development Corporation, VaGodwills Masimirembwa, avo vaudzawo komiti iyi kuti Mbada Diamonds iri kuita basa rayo zvakajeka.
VaMasimirembwa vatsinhirawo kuti zvirango zvehupfumi zvakatemerwa makambani akaita seMbada neMarange Diamonds, zviri kuita kuti Zimbabwe itadze kuwana mari yakawanda kubva mukutengeswa kwemangoda ayo.
VaMhlanga vati mangoda avari kuchera ndeepamusoro, asi vakati kambani yavo yakatsvaga vana mazvikokota pamwe nekutenga michina yekuti itangise kuchera mangoda ari pasi pasi.
Pavabvunzwa kuti iri kuitirei vagari vekwaMarange pamwe neavo vayakabvisa kwaChiadzwa, VaMhlanga vati Mbada Diamonds yakavikira vanhu ava dzimba kuArda Transau uye iri kuvabatsira nechikafu nembeu pamwe nezvekurimisa.
Vatiwo kambani yavo iri kuvaka zvikoro, kuwanisa vanhu mvura yakachena, pamwe nekutsigira mutambo wenhabvu nekuita zvimwe zvakasiyana siyana zvinoyamura veruzhinji.
Kambani iyi inotsigira mukombe we Mbada Diamond unotambirwa nezvikwata zvenhabvu zviri muPremier Soccer League, uye inotsigirawo chikwata chenhabvu chekwaMutare cheBuffaloes nezvipfeko nemari.
Mbada Diamonds ndeimwe yemakambani akatemerwa zvirango zvehupfumi nenyika dzekumavirira nekuda kwekuti vamwe vari mumakambani aya, vanodyidzana nemutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, nebato ravo, avo vari pazvirango izviwo.
Svondo rapera, gurukota rezvemari, Va Tendai Biti, vakati hurumende haisi kuwana mari yayanga ichitarisira kubva kumangoda, izvo zvichaita kuti itadze kuita basa rayo nemazvo. Vakatiwo kambani ye Anjin, iyo inova mubatanidzwa wehurumende nekambani yekuChina, haina kana kobiri zvaro rayapa hurumende gore rino.